Vanin’andro fety: tafakatra 44.000 Ar ny kilaon’ny makamba | NewsMada
Vanin’andro fety: tafakatra 44.000 Ar ny kilaon’ny makamba
Midangana ! Azo tsorina fa anisan’ny vidin-tsakafo lafo ny makamba (crevette), indrindra amin’izao fetin’ny faran’ny taona izao. Tafakatra 44.000 Ar ny kilaon’ny makamba (tsy misy lohany intsony) eny an-tsena eto Antananarivo sy ny manodidina, raha nanodidina ny 30.000 Ar hatramin’ny 35.000 Ar ny kilao, talohan’izao andro fety izao. Manodidina ny 15.000 Ar na 17.000 kosa ny makamba miaraka amin’ny lohany na madinika.
Tafakatra 47.000 Ar ny kilao eny amin’ny tranombarotra lehibe ho an’ny makamba (tsy misy lohany) madinika ary mahatratra 60.000 Ar ny vaventy.
Nilaza ny mpaninjara fa tsotra ny mahatonga io vidiny hidangana io. Miakatra ny tinady satria maro ny manao fety sy lanonana, ka tsy maharaka ny tolotra avy any ifotony. Ao anatin’ny fotoana fikatonan’ny jono makamba rahateo izao faran’ny taona izao, ka vitsy ny vokatra ho an’ny mpanjifa. Tsy miverina misokatra anefa ny fotoam-panjonoana raha tsy manomboka amin’ny volana marsa 2019 indray.
Niakatra kely koa ny hafa
Teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, nisondrotra kely koa ny vidin’ny kilaon’ny akoho fakana nofo, lasa manodidina ny 10.000 Ar raha 8.000 Ar talohan’ny fety. Lasa 15.000 Ar ny kilaon’ny akoho gasy raha 14.000 Ar teo aloha. Tsy niova kosa amin’ny ankapobeny ny kilaon’ny henakisoa sy ny henan’omby, samy 15.000 Ar ny nofony, 13.000 Ar hatramin’ny 14.000 Ar ny mifangaro.
Toy ny isan-taona, manodidina ny 60.000 Ar hatramin’ny 100.000 Ar ny vidin’ny vorontsiloza arakaraka ny habeny. Manodidina ny 40.000 Ar hatramin’ny 50.000 Ar kosa ny vorona hafa.
Nilaza ny mpivarotra fa tsy hihetsika ireo vidiny voatanisa ireo mandrapahatonga ny faran’ny taona, ary amin’io fotoana io ary no mety vao mainka hiakatra raha tsy ampy ny famatsiana.